Eng,Yarisow oo sheegay in maamulkiisa uu ka shaqeynayo sidii shacabka loo siin lahaa awoodda dowladnimada (Sawirro). | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Eng,Yarisow oo sheegay in maamulkiisa uu ka shaqeynayo sidii shacabka loo...
Eng,Yarisow oo sheegay in maamulkiisa uu ka shaqeynayo sidii shacabka loo siin lahaa awoodda dowladnimada (Sawirro).
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa daah furay tartanka Cayaaraha dugsiyada degmada Hodan, isagoo ku boorriyey in ay ka qayb qaataan Nabadda iyo horumarinta caasimadda.
Previous articleShirkii u dhaxeeyey Booliska Federaalka iyo kuwa goboleedyada oo Bay-dhabo ka socdo (Sawirro).
Next articleCabdi-Xaashi oo qaabilay Michael Keating (Sawirro).